Qaybta 1. Waa maxay Samsung xal kabashada?
Qaybta 2. versions of Samsung xal kabashada
Qaybta 3. Waa maxay sababta ay u soo saarto kabashada Samsung Data?
Qaybta 4. kabashada Samsung kale oo xal
Waxaa shaki la'aan waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo la hubiyo in user helo ugu fiican iyo natiijooyinka laga cabsado oo u oggolaan doonaa oo keliya ma aha user inuu ka soo kabsado xogta, laakiin sidoo kale helo files ee tike. Waxaa si gaar ah ayaa loo sameeyey qalab Samsung si loo hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican oo laga cabsado in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay hubiyaan in ay helaan haddii la siiyey barnaamijka maqan iyo files si celinta waxaa la samayn karaa iyada oo aan wax arrintan oo dhibaato sameeyo.
Waxaa jira dhowr versions of barnaamijka taasoo ay hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan. Waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in version la doortay sida looga baahan yahay nidaamka iyo shaqeynayaan guud oo uu soo arkaa arrin ugu fiican si ay u helaan ka shaqeynayaan guud sameeyaan. Ka dib markii qaar ka mid ah versions of software ka soo kabashada Samsung sida horumarinta nidaamka iyo goobaha ay tahay in la isticmaalo xaquuqda ay u helaan arrin guud oo taageeray in geeddi-socodka soo kabashada xogta iyo jid weyn oo faahfaahsan:
Samsung xal kabashada Waxaan
Samsung soo kabashada xal II
Samsung soo kabashada xal III
Samsung xal kabashada IV
Samsung xal kabashada V
Samsung soo kabashada xal 5.6
Samsung soo kabashada xal 4
Badanaa lagu rakibay on Windows XP xal kabashada waa inuu xaqiijiyo in sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay la raacay iyo waxaa sidoo kale codsatay marka ay timaado soo kabashada xogta. Waxa uu ahaa ka ugu wanaagsan oo gobolka ka socda habka tahay xogta soo celinta halkaas oo user xaqa u baahan yahay si loo hubiyo in qasabno yar la sameeyo si loo hubiyo in SIS habka u dhammayn weydeen oo kaliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican iyo gobolka Natiijada tahay in arrintan la xiriira. Sida magaca muujinaysa in ay tahay version afraad ee barnaamijka in la soo saaro arrintan la xiriira iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in uu hormartay teknoolajiyada lagu gundhig si loo hubiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Barnaamijka waxaa lagala soo bixi karaa halkan iyo qaybaha updated mustaqbalka sidoo kale waxaa laga heli karaa website-ka ayaa la sheegay in la hubiyo in user helo gobolka natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira.
Samsung soo kabashada xal 5
La socon daaqadaha 7 inta badan waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka in la hubiyo in dadka isticmaala ay natiijada ugu wanaagsan heli karaan. Waxaa sidoo kale in la xusay waa in dadka isticmaala inay hubiyaan in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa habka ugu wanaagsan oo sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in barnaamijka waa in la isticmaalo iyada oo ay kormeerayaan khabiir sida qaybo badan oo barnaamijka laga yaabaa inay bixiyaan adayga waa sameeyo si user ah arrintan la xiriira iyo ujeedada laga yaabaa in aan la oofin. Waa version labaad ee ugu danbeysay ee barnaamijka in la soo saaro oo sidaas daraaddeed ma aha in jirka si loo hubiyo in ugu fiican ayaa u dhiibay iyaga oo aan wax arimo ah iyo dhibaato. Hab guud ee barnaamijka waa kan ugu fiican oo URL download ee barnaamijka waa halkan meesha user Hubi in ka dhigi kartaa in barnaamijka aan la soo bixi oo kaliya laakiin user sidoo kale helo gobolka natiijooyinka tahay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa hoos caawimo haddii user waa inuusan ahaan si ay natiijada ugu wanaagsan waa la damaanad qaaday oo user sidoo kale helo gobolka maaraynta geedi socodka tahay in arrintan la xiriira:
Sida loo isticmaalo Samsung soo kabashada xal 5
Waxaa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka oo loo sameeyay si loo hubiyo in user helo natiijooyinka ku jira line la guulaha guud ahaan in ay tahay in la helay ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu bixiyaa hababka ugu fiican ee la sameeyo oo dhan waxaa suurto gal ah haddii barnaamijka ayaa la isticmaalay si waafaqsan fikradaha guud ee la soo bandhigay tutorial gudahood. Geedi socodka ku haboon oo aan gefo talaabo kasta oo la raaco si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan.
1. Jidka in la raaco waa isku mid sida Start> Samsung Recovery Folder> abuurtaan barnaamijka:
2. celin button waa in la sii adkeeyey si aad u hubiso in shaashada soo socda u muuqataa,
3. Barnaamijka ayaa markaa ka codsan doonaan in ay bilaabi nidaamka iyo user waa in la siiyo fasax ay:
4. Marka kombiyuutarka Banaadir user ku arki doontaa in ay bar-socodka dib u soo celinta waxaa ka baaraandegidda:
5. Nidaamka waa in la billaabeen mar kale barnaamijka ayaa ku dhameysatay kaalinta celinta iyo waxa ay sidoo kale dhameystiray habka Dhameystiran:
Waxaa jira liis dheer oo arrimaha ay waajahaan user ee arrintan la xiriira iyo user sabab la mid ah waxaa mararka qaarkood aan ku faraxsanahay barnaamijka. Labada sababood ee waa sida soo socota:
1. arrimaha Dhignaashada
Waa arrinta ugu aasaasiga ah iyo sare in wajiga user ee la xiriirta qaab guud ee barnaamijka. Arrinta ugu badan ee arrintan la xiriira waa in barnaamijka la isticmaalo oo ay ku isticmaala oo ku rakibtay daaqadaha 7 gal nidaamka laakiin marka ay timaado qaab barnaamijka guud ee la xiriirta carmallada 7 markaas arrimaha waafaqid kac oo ma fududa in la qabsadaan la sabab la mid ah user uninstall barnaamijka.
2. arrimaha shaqeynayaan
Samsung arrintan la xiriira ayaa sheegtay in barnaamijka dib u soo kabashada waa inay awoodaan si loo hubiyo in xogta 100% laga soo celinayo, laakiin xaqiiqada dhabta ah waxay tahay in mararka qaarkood, ma ay awoodaan in ay helaan ugu fiican oo gobolka ka mid ah xallinta arrintan tahay in arrintan la xiriira. User ayaa arrintan la xiriira helo farriimo badan oo qalad iyo sabab la mid ah ma fududa in la soo saaro xogta iyo halkan waa sabab kale taas oo ka dhigaysa hubiyo in barnaamijka waxaa gebi ahaanba laga saaro.
> Resource > Samsung > Samsung Recovery Solution, A Samsung Software Waxaad doonaysaa in saar